Kutamba mimhanzi kutenderera kubva kuSpotify paApple Watch kunogona kuve kwechokwadi munguva pfupi iri kutevera | Ndinobva mac
Spotify ndiye asingazivikanwe mambo wekutenderera mumhanzi na vanopfuura mamirioni mazana matatu evashandisi, Pakati pevanyori uye vashandisi vebasa remahara nezviziviso. Zvisinei, kushandiswa kwayo kweApple Watch kunoramba kuripo imwe yeakaipisisa ichienzaniswa nemamwe masevhisi akafanana, sezvazviri na Pandora.
Iyo kambani yeSweden yakatanga munaNovember 2018 chikumbiro cheApple Watch, inoenderana inoenderana iyo inobvumidza kuwana uye kudzora mimhanzi yepuratifomu uye kutamba kwepodcast. Hapana chimwe. Kusvika nanhasi, isu hatichakwanise kudhizaina mumhanzi kubva kuApple Watch isina kubatana ne iPhone.
Neraki, zvinoita sekunge izvo zvichachinja munguva pfupi iri kutevera. Sekureva kweiyo iPhone-Ticker.de yepakati, kuburikidza nemifananidzo iyo yatinoperekedza muchinyorwa chino, Spotify iri kuyedza basa iro rinotendera vashandisi vepuratifomu iyi, nakidzwa nenziyo dzaunofarira uye zvinyorwa zvekunyorera zvakananga kuburikidza neApple Watch.
Vashandisi vane izvozvi basa iri rakaitwa, ndiani iri muchikamu che beta, unogona kufambisa nziyo dzeiyi mimhanzi papuratifomu wakananga kuburikidza neBluetooth headset kana zvakananga neakavakirwa-mukati maspika eApple Watch, basa rinoratidzwa seBeta mubhuruu, patinoda kubatana kune mudziyo kuti utambe zvemukati .
Iyo Spotify application yeApple Watch haingokutenderi iwe kutepfenyura mumhanzi, asi zvakare, izvo zvakare hazvitenderi iwe kurodha mimhanzi munharaunda kuti uterere kunze kwenyika. Ndinovimba iyi imwe ficha, zvakare inotarisirwa kwazvo nevashandisi, ichave ichiwanikwa mune inotevera inovandudza. Ndinovimba, vese vachasvika pamwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kutamba Spotify Kutenderera Mimhanzi paApple Kutarisa Kunogona Kuve Kwechokwadi Munguva pfupi
Kukwidziridzwa kwemaAirPod evadzidzi kuchiri kushanda, mhanya